Taliye cusub ee ciidanka AMISOM oo maanta gaaray magaalda Muqdisho
Muqdisho:-Taliyaha cusub oo dhawaan uu u magacaabay ciidanka AMISOM Madaxweynaha dalka Ugaandha Yuweri Musaveni ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM Gen. Andrew Guti ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde ee magaalda Muqdisho ku soo dhaweeyey taliyihii hore ee ciidanka AMISOM Paddy Akunda , iyo saraakiil ka tirsan ciidanka DFKM.
Taliyaha cusub ee Ciidanka AMISOM Andrew Guti ayaa la filayaa in mudo uu ku sugnaan doono magaalada Muqdisho isagoo ka dibna ka qayb geli doona shir ka dhici doona dalka Itoobiya. Dhinac kale Waxaa isla maanta gaaray deegaano ka tirsan Gobollada Jubooyinka Saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM waxaan ay kulamo gooni gooni ah la qaateen saraakiil ka tirsan ciidamo taageersan DFKM iyo ururka Raaskaambooni oo uu madaxda u yahay Axmed Madoobe.
Saraakiishaan ka tirsan ciidanka AMISOM ayaa waxaa kale oo ay kulamo gaar ah la qaateen saraal ka tirsan ciidanka dalka Kenya oo iyagu hadda haysta degaano ka tirsan gobollada jubooyinka oo ay horay uga talin jireen ciidanka Al-shabaab oo iyago ka baxay degaanadaas. Saraakiisha hogaaminaysa ciidanka huwanta ah ee DFKM ,Raaskaambooni iyo ciidanka dalka Kenya ayaa waxaa ay kulankooda ay ku qorshaynayaa guluf colaadeed oo ay doonayaan in ay ku qabsadaan degaano hor leh oo ka tirsan Gobollada Jubooyinka iyo Gobolka Gedo.
Ciidanka ururka Al-shabaab ayaa baneeyey degaano dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Gedo iyo Gobolka Jubada Hoose iyagoo xusay in ay u jeedadu tahay in ay yareeyaan khasaaraha soo gaaray ciidankooda ayna bedeleen qorshahoodii dagaal si ay khasaaraha ugu badan ay u gaarsiyaan ciidanka dalka Kenya iyo Itoobiya oo gacan siinaya ciidamo Soomaali ah.